Kedu ihe ikikere Creative Commons nyere ikikere | ECommerce ozi ọma
Encarni Arcoya | | Nche
Wasntanetị bụ ihe omume mere mgbanwe. Ndị ode akwụkwọ, ma ha bụ ndị nrụpụta akwụkwọ, ndị edemede, ndị na-ese ihe ... nwere ike igosi mmadụ niile ikike ha nwere. Onye obula tokwara ha, katoo ha, wdg. Ma ha na-ezu ha ohi. Ruo mgbe ikikere Creative Commons pụtara.
Akwụkwọ ikike a bụ akụkụ dị mkpa metụtara nwebisiinka. Site na ha, enwere ike ichekwa ikike ndị a ma ndị ọzọ anaghị adaba n'echiche ma ọ bụ ọrụ nke otu onye (ma ọ bụ ọtụtụ). Ma, Kedu ihe bụ ihe ikikere nke ihe okike? Kedu ka ha si arụ ọrụ? Kedu ụdị ndị enwere? Lelee ihe anyị kwadebere iji mee ka ihe doo gị anya.
1 Kedu ihe bụ ikikere Creative Commons
1.1 Creative Commons ikikere na nwebisiinka
2 Olee otú ikike si arụ ọrụ
3 Ofdị ikikere nke Creative Commons
3.1 Akara ikike
3.2 Akwụkwọ ikike ịmata - Kesaa Alike
3.3 Onyinye -Bughi oru na oru
3.4 Ghọta - Na-abụghị nke azụmahịa
3.5 Onwere - Na-abụghị nke azụmahịa -
3.6 Onwe -Nnaghi-azu ahia- oru adighi iche
4 Ihe akara ngosi ikike pụtara
5 Ebee ka eji ikikere Creative Commons
Creative Commons ikikere, ma ọ bụ dịka a na-akpọkarị ha, CC, bụ ngwaahịa nke so na nzukọ na-enweghị uru. Ihe ọ na-eme bụ nye ụdị ikikere, ma ọ bụ ikike nwebisiinka, n'ụzọ iji chebe ọrụ ndị ọzọ. Yabụ, ịnwere ike ịkekọrịta, kesaa ma ọ bụ kwe ka ejiri rụọ ọrụ gị, ọ bụ naanị maka ojiji nkeonwe ma ọ bụ nke azụmaahịa.
N'ezie, ọ nwere ike ịbụ na ị hụla akwụkwọ ikike ndị a. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ụfọdụ foto, akwụkwọ, onyogho, ederede, wdg. Ọ debere gị "echekwara ikike niile" ma ọ bụ "echekwara ikike ụfọdụ."
Creative Commons ikikere na dnwebisiinka
Otu ndudue ị nwere ike ịme bụ iche na Licensị Creative Commons na-anọchi ikike nwebiisinka, ma ọ bụ na ọ bụrụ na ịnwe ikikere ndị a, ị gaghịzi edebanye aha ọrụ gị ebe ọ bụla ọzọ. Ọ bụghị eziokwu.
N'ezie, ọ bụ ụzọ nke ahụ ndị edemede na-ekpebi otu ha ga-esi kesaa ọrụ ha, mana enyela onye nwe ya. N’aka ozo, oburu na imaatu ide akwukwo ma biputa ya na blog gi n’okpuru ikike Creative Commons, nke ahu aputaghi na obu nke gi, ma oburu na obu. Ọ dị mkpa ka ị debanye aha na ọgụgụ isi nke mere na e nwere akwụkwọ na-egosi na ọ bụ nke gị.
Olee otú ikike si arụ ọrụ
Creative Commons ikikere na-arụ ọrụ dị mfe. Have ga-ahụ ha dị ka Ngwá ọrụ ka ndị edemede wee nwee ike ijikwa ojiji ndị ọzọ na-eme n'ọrụ ha, ebe ọ bụ na ha na-achịkwa akụkụ ndị a na-ekwe ka ha na ha na ndị ọzọ na-agaghị eme.
Ikike ndị a dabere na arịa ọgụgụ isi. Nke ahụ bụ, ha bụ ihe abụọ dị iche mana otu (ikike) na-akwado nke ọzọ (arịa ọgụgụ isi) ebe ọ bụ na, ọ bụrụ na ịnweghị ikike nke ihe onwunwe, ịnweghị ike ịnwe ikike na ha.
A na-enweta ikikere Creative Commons n'efu. N'ezie, ọ bụ usoro dị mfe ma dịkwa mfe. Ihe ị kwesịrị ibu ụzọ mee bụ ịhọrọ ikike dabere n’ụdị dị iche iche dị (na nke anyị ga-ahụ n’okpuru). Emechaa, a ga - ajụ gị ka ị jupụta data (onye edemede nke ọrụ ahụ, aha ọrụ na url ebe edepụtara ya) ka o wee nwee ike ịnye koodu.
Ofdị ikikere nke Creative Commons
Na weebụsaịtị Creative Commons ị ga-ahụ na e nwere ụdị ikikere dị iche iche. Mara ha dị ezigbo mkpa n'ihi na ị ga-amata n'ezie ihe ị chọrọ dịka ọnọdụ gị si dị.
Ndị a bụ ihe ndị a:
Akwụkwọ ikike a bụ "nke kachasị ike", yabụ ikwu okwu. Ga-ekwe gị ndị ọzọ na-ekesa, retouch, imeghari ma jigharịa ọrụ ha, ọbụna n'ahịa, ọ bụrụhaala na ha na-enye onye mbụ ego. Ọ bụ nke na-enye ohere kachasị ịgbasa nke ihe echedoro na akara a n'ihi na onye ọ bụla ga-amata aha onye mere mbụ ya.
Akwụkwọ ikike ịmata - Kesaa Alike
Nke a bụ ikike maka jigharịa, dozie ma wuo ọrụ dabere na ihe okike a, ọbụlagodi maka ebumnuche azụmahịa, ọ bụrụhaala na enwere otuto na nke mbụ. N'okwu a, ọrụ ndị dabere na nke ahụ, ga-ebukwa otu ikikere ahụ (dịka ọmụmaatụ, ọ bụ nke ejiri ya na Wikipedia).
Onyinye -Bughi oru na oru
Dị ka aha ya na-egosi, anyị na-ekwu maka ikikere Creative Commons nwere nke enyeghị ya ohere iji rụọ ọrụ ọzọ maka ojiji ọ bụla, nkeonwe ma ọ bụ nke azụmahịa, mana ị nwere ike ịkekọrịta nke a na ndị ọzọ ma ọ bụrụhaala na ị na-enye onye dere ya otuto.
Ghọta - Na-abụghị nke azụmahịa
Ọ na - enye gị ohere ime otu ihe ahụ dịka ikikere nnabata, belụsọ na mpaghara azụmaahịa, ebe ọ bụ na enweghị ike iji ha maka ebumnuche ahụ. Yabụ, na ọkwa onwe gị ị nwere ike iji ya, ma ọ bụghị iji ya nweta uru (uru azụmahịa).
Onwere - Na-abụghị nke azụmahịa -
Na nke ugbu a, anyị na ihe yiri nke gara aga. A na-ahapụ ya ka o jigharịa, gbanwee ma wuo ọrụ dabere na nke mbụ mana ọ bụghị maka ebumnuche azụmahịa. Ikwesiri inye otuto na nke mbụ.
Onwe -Nnaghi-azu ahia- oru adighi iche
Ọ bụ ikikere Creative Commons kachasị na-egbochi ha niile n'ihi na ọ naghị enye gị ohere ịmegharị, gbanwee, gbanwee, wdg, naanị ibudata ọrụ ma kesaa ya. Na ihe a niile na-enweghị agwa azụmaahịa, mana ọ bụ nke onwe.
Ihe akara ngosi ikike pụtara
Ọ bụrụ n’ịnwa ịnweta ikike Creative Commons, ma ọ bụ chọọ ịnwale, ị kwesịrị ịma nke ahụ, ozugbo itinye data niile ha ga-enye gị koodu na ọkọlọtọ yabụ ị nwere ike ijikọ na okike gị. Ihe ọkọlọtọ ahụ nwere ikikere gị, mana akọwapụtara ya n'ụzọ atọ dị iche iche:
Na Commons Deed, nke bu nchikota ederede ya na akara ngosi.
Na Usoro Iwu, nke bụ koodu ga-ezo aka na ikike ma ọ bụ ederede iwu.
Koodu Dijitalụ, ya bụ, koodu dijitalụ nke igwe ọ bụla ga-agụ nke ahụ ga-eme ka igwe ọchụchọ chọpụta ọrụ gị ma mara ọnọdụ ị kwupụtara maka ya (wee kwanyere ha ugwu).
Ebee ka eji ikikere Creative Commons
Akwụkwọ ikike ndị a bụ ezigbo akụ maka ọtụtụ ndị ọkachamara, ebe ha na-ahapụ ha ka ha jikwaa ọrụ ha na ịntanetị. Ma olee ihe ndị mmadụ nwere ike iji ha? Ọfọn, dịka ọmụmaatụ:
Ndị nwere websaịtị ma ọ bụ blọọgụ ma dee ya. N'ụzọ ahụ, amaokwu niile ga-enwe njikwa.
Ndị na-ede akwụkwọ ma nwee ike kesaa site na Internetntanetị.
Ndị na-ese foto, aghụghọ, ihe osise ... na ihe ọ bụla ọzọ a na-ahụ anya (vidiyo, onyonyo, ọdịyo) nke ndị ọzọ nwere ike ịkekọrịta (ma ọ bụ na enweghị ikike onye edemede).
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Nche » Kedu ihe bụ ikikere Creative Commons
Kedu ihe bụ Ngwakọta Ahịa na gịnị maka ya?
Otu esi emepụta akaụntụ PayPal